Antsohihy Lehilahy iray matin’ny fitsaram-bahoaka
Lehilahy iray no maty tratran’ny fitsaram-bahoaka tao Analamanga, fokontany Ankiririky avaratra II,distrikan’ Antsohihy ny marainan’ny alatsinainy 30 Martsa 2020 teo tokony tamin’ny 03 ora.
Raha ny vaovao nampitan’ny lehiben’ny fokontany tany an-toerana dia tratra namaky trano ity lehilahy ity. Niezaka ny nitsaoka ity farany saingy tratran’ny fokon’olona ihany. Tsy tana moa ny mponina tao an-toerana fa avy hatrany dia nanapatra ny hatezerany ka nidaroka sy namono ity lehilahy. Niezaka ny niaro ary niantso mpitandron’ny filaminana ny lehiben’ny fokontany saingy tsy tana intsony ny ain’ilay lehilahy rehefa tonga ireto farany. Marihina fa teo akaikin’io toerana nahafatesan’ilay lehilahy io ihany ilay trano novakiany ary tsy vao izao fa efa mateti-pitranga ny vaky trano any amin’iny faritra Antsohihy iny izay tena mampihorohoro ny mponina mihitsy. Tonga nijery ifotony ny zava-nisy ny mpitandron’ny filaminana ary naterina tany amin’ny trano-paty ao an-toerana ny nofo mangatsiakan’ilay lehilahy.